Hiran State - News: HS:-Tartankii Quraanka Kariimka ee bisha Ramadaan oo lagu soo gabo gabeeyey
HS:-Tartankii Quraanka Kariimka ee bisha Ramadaan oo lagu soo gabo gabeeyey
HS:- Magaaalda B/weyne oo uu maalmahii tagay ka socday tartan qu'aan aqris ah ayaa ugu daneyn lagu so gabo gabeeyey halkaas.
Tartankani ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka dhalinyaraaa gargaar oo ah urur dhalin yaro oo iskooda isku aruursaday, si aay u garab istaagaan amaba u dhiiragaliyaan dhalinta wax ka barata dugsiyada qur'aanka ee magaalada B/weyne.
tartankani oo ahaa mid siweyn loo soo abaabulay ayaa ahaa tartanka kaliya ee dhianca qur'aanka ee ka dhacay magalada B/weyn soonkani oo dhan. Tartankani ayaa waxuu ahaa 4 qeybood ee quranka kariimka ah oo kala ah. 30 ka jus, 15 jus, 10 jus iyo 5 ta jus. Afartaas qeybood waxaa loo tartamaya mid waliba kaalmaha 1 aad, 2aad, 3 aad
Ardaydii ka qeyb gashay tartanka ayaa midwaliba doonayay kaalinta koowaad balse dhamaan ardeydii ka qeyb gashay tartanka sidan ayey u kala badiyeen.
1: Cabdiwali Maxamed Xusen kitaab qur aan iyo $ 100
2: Cabdishakuur yusuf cisman kitaan quraan iyo $ 70
3: Maxamed nuur xiriye kitaab quraan iyo $ 50
15 ta jus ardayda kalmada kagalay.
1: Maxamed cabdi ciidoowle kitaab qur aan iyo $ 80
2: Xusen Maxamed Cisman kitaab qur aan iyo $ 60
3: Axmed rashid Abdiwaaxid kitaab qur aan iyo $ 40
10 ka jus ardadii kalmaha kagashay.
1: Saadaam xusen yusuf kitaab qur aan iyo $60
2: Maxamed amiin waceys kitaab qur aan iyo $ 40
3: maxamad cisman xaaji kitaab qur aan iyo $ 35
5 ta jus ardadyda kalmaha kagashay.
1: yaasir axmed jeyte kitaabqur aan iyo $ 40:
2 ciise maxamed cismaan kitaab qur aan iyo $ 35
3: Cabdiraxman cumar guuleed kitaab qur aan . $35:
4 caamir mustafe xaaji kitaab qur aan iyo $ 30
Ma ahan oo kaliya tartanka qur'aanka oo kaliya tartamada lagu qabtay magaalada B/weyne waxaa jira tartan ciyaaraha kubada cagta ah oo isaguna si weyn loo soo agaasimay bisha ramadaan kaasi oo dadweynaha ku dhaqan magaalada siweyn u soo jiitay.
· admin on August 10 2012 17:10:57 · 0 Comments · 2207 Reads ·
14,568,708 unique visits